I-China pp lukathayela we-partiton Umkhiqizi kanye noMphakeli | Sihai
Ikhadi le-pp elingenalutho lamakhadi wenziwe ngebhodi elingenalutho le-PP, bese lidayisa noma lidayisa umumo olindelwe, bese lihlanganiswa ngesandla ngesiqephu.Ingavimbela ngempumelelo ukukhiqizwa kukagesi omile, ukuvalelisa ngokuphelele ukususwa kwezinwele zebhodi lephepha lendabuko, ubumanzi nezinye izinkinga, inzuzo engenayo yomkhiqizo, ukuvikelwa okuphelele, ukuthunyelwa, ukuhlukaniswa kwemikhiqizo, ukugcinwa kwemikhiqizo, ukuhlukaniswa kwemikhiqizo njalonjalo.
Ukusetshenziswa kokwahlukaniswa kukathayela okwenziwe ngamaphepha
Izimonyo, umakhalekhukhwini, ibhodi lesifunda, imikhiqizo ye-elekthronikhi, izingxenye zocingo, izingxenye zeselula, izingxenye ze-iphone, izingxenye zekhompyutha neminye imikhiqizo engenayo, ukuthunyelwa, izitolo kanye nendawo yokugcina izinto kusetshenziswa. Ukufakwa kwezingxenye zezimoto, imikhiqizo kagesi, izinto zasekhaya.
Isihlukanisi sephepha elingenalutho semikhiqizo ehlukile futhi singenza ukwahlukaniswa kwe-ESD, ukwahlukanisa kwe-ESD, ukwahlukanisa okwenziwe kahle, ukwahlukanisa kwe-foma, i-partiton yeshidi elingenalutho, ukwahlukanisa ishidi elingenalutho nge-EVA, i-EVA partiton, i-anti-static EVA partiton, ukwahlukanisa kwe-ESD EVA, ukushisela okushisayo ibhokisi lokuhlukanisa, incibilikisi eshisayo encibilikayo.
Langaphambilini pp lukathayela wokuvikela ishidi
Olandelayo: kk ishidi eziyize, kp ishidi lukathayela